Nge-Agasti ka-2021-kwiNombolo ye-1 yeWebhusayithi yaseYurophu
Archives Monthly: Agasti 2021
31 EyeThupha 2021
UZaur Abdullaev ujongene noDejan Zlaticanin eRashiya nge-11 kaSeptemba
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Abdullaev vs.Zlaticanin, UDejan Zlaticanin, wbc, UZaur Abdullaev	0
UZaur Abdullaev ngokuchasene noDejan Zlaticanin
Ekaterinburg, eRashiya 11/9/21
I-Russia UZaur Abdullaev Siza kujongana neentshatsheli zehlabathi zangaphambili ezivela eMontenegro, UDejan Zlaticanin, nge-11 kaSeptemba e-Ekaterinburg, eRashiya, kwi-Silverweightweight isihloko se-World Boxing Council.
U-Abdullaev (13-1-0, 8 Ko`s) lelinye lawona mathemba aqaqambileyo kwilizwe lakhe. Ilahleko kuphela kwirekhodi yakhe yayichasene nentshatsheli elawulayo uDevin Haney. Kumlo wakhe wamva nje we-Matshi ophelileyo, woyisa i-Armenia uZhora Hamazaryan ngesigqibo esibanzi.
UZlanticin (24-2-0, 16 Ko's), unamava amaninzi kumdlalo wamanqindi, kuba wayesele eyintshatsheli yeWBC kwicandelo lobunzima. Nangona engazange alwe ukusukela nge-2019, uhlala esebenza kwaye eqeqesha ithuba, kwaye ngoku selifikile.
UKazuto Ioka noFrancisco Rodriguez benza ubunzima ngaphambi kwangomso
IBoxen247.com Ukulwa ubunzima	UFrancisco Rodriguez, Ioka vs.Rodriguez, UKazuto Ioka	0
UKazuto Ioka vs.Francisco Rodriguez
I-Ota-City General Gymnasium, Tokyo, Japan 1/9/21
UKazuto Ioka (26-2, 15 KOs) I-115 LBS vs. UFrancisco Rodriguez (34-4-1, 24 KOs) 114 LBS
(Isihloko seWBO Junior Bantamweight)
U-Ioka: “Ndiyabulela kuba ndikwazi ukulwa phantsi kwesi sifo, ngoko ke ndinqwenela ukubonisa eyona ndlela ndiqhuba kakuhle ngayo ukuphendula inkxaso yabantu.”
URodriguez uthi: “Thina bantu baseMexico silwa ngentliziyo. Singamagorha. Ndikulungele ukuphumelela. ”
UJosh Holmes yintloko nxamnye noJonny Phillips eLancashire ngoLwesihlanu
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Ukunyuswa kukaDennis Hobson, Isikolo sokulwa, Indawo yokulwa, IHolmes vs.Phillips, UJonny Phillips, UJosh Holmes	0
UJosh Holmes vs UJonny Phillips
IHolo likaMasipala eColne, eLancashire, eNgilani 3/9/21
Ubunzima UJosh Holmes ufumana ukubuyela ekhaya ngolwesiHlanu kaSeptemba 3 xa iikhamera zeFightzone zisiya kwiHolo kaMasipala eColne - indawo ehlala iqinisekisa imeko entle.
UHolmes ukhanyisile eFightzone kabini ngaphambili, wakha irekhodi lakhe ukuba li-7-0 (1), kwaye afumane olona vavanyo lwakhe luchanekileyo xa sele eyintloko yomnyhadala kaColne. Umntu oneminyaka engama-26 ubudala uya kuthatha iBerkshire UJonny 'UMatador' Phillips ngaphezulu kwemijikelo emithandathu kwinto ekufuneka ibonelele ngenduku efanelekileyo kwinqanaba lakhe.
UPhillips, uphumelele isihlanu kwali-11, akaze ayekiswe, kwaye imilo emibini edlulileyo yanikezela ngethemba elithembekileyo ngexabiso lokuzilolonga ezintandathu.
UHolmes, owayevela kufutshane ne-Earby, wayeyimpumelelo engahlawulwayo, ephumelela imilo engama-24 kwama-29, kwaye ngoku uqeqeshwa nguRobert Rimmer. Emva kokutyikitya kwi-Fight Academy ekuqaleni konyaka, uJosh ujonge ukuqala ukuqokelela izihloko kwiinyanga ezili-12 ezizayo kodwa uza kungena iringi ngesilumkiso esivela kumphathi onamava, uKevin Maree.
"UJonny Phillips yimpi eyingozi kwaye iya kuba luvavanyo oluhle kuJosh," utshilo uMaree. Ndiyazi ukuba uJonny uza kuphumelela, uzama ukuguqula irekhodi lakhe, kwaye bebewufuna ngenene lo mlo. Ke beza ngokuzithemba okwenyani, kwaye ebekhe wangena kunye nabanye abaphezulu. Ndiyakholelwa ukuba uJosh angaqhuba kwinqanaba eliphezulu, kodwa lo ngumlo onzima.
“Ndilindele ukuba andilwe kakuhle,” utshilo uJosh. “Ndakhe ndambona ngaphambili, uyeza ukuba ahambe nyani kwaye yile nto siyifunayo, inyathelo elinyukayo. Ungumchasi olungileyo kodwa ndizimisele ukwenza umsebenzi kuye.
Uzele uloyiso kwaye uphumelele irekhodi lakhe. Uyakuphuma edubula, nto leyo eza kundifanela kuba uzakuphela ehamba entweni enkulu. Kulungile ukuba silwe ekuhlaleni, ndiya kuba nayo yonke inkxaso yam apho, isihlwele esilungileyo esiza kundibukela. Uza kubona isihlwele sigxobhoza kwaye iya kuba ngumlo wam ongcono ukuza kuthi ga ngoku. Kuza kubakho izithonga ezibuyela kum, kwaye andinakulinda! ”
U-Isaac Rodrigues uphumelele imfazwe enegazi nxamnye noSergio Santos Dantas eBrazil
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UIsaac Rodrigues, IRodrigues vs iDantas, USergio Santos Dantas, wbc, I-WBC FECONSUR	0
UIsaac Rodrigues vs Isiphumo seSergio Santos Dantas
IPará Clube, eBelém, ePará, eBrazil 28/8/21
Umlo onomdla eBelém, ePará-Brazil, nase ixesha lokuqala umlo weWBC FECONSUR wawukwelinye ilizwe laseBrazil, ngaphandle kweSão Paulo.
UIsaac Rodrigues noSergio Santos Dantas balwa imfazwe, eyaqala yaba ligazi.
Zombini iimbethi manqindi zinike konke ngaphakathi kwiringi, zibonelela ngomdlalo obalaseleyo kubalandeli kunye nokonwabisa abaphulaphuli.
UIsaac Rodrigues usikekile phakathi kwebunzi nebhiya, nto leyo ibangele ukuba umlo ube nzima. USergio Dantas wehlelwe kukungqengqa kathathu ngexesha lomlo (3rd, 6th kunye 10th Round).
Ekupheleni kwemijikelo eli-10, u-Isaac Rodrigues wathweswa isithsaba njengentshatsheli yeWBC FECONSUR, ngesigqibo esifanayo.
Kwikona kaRodrigues bekukho umqeqeshi u-Ulysses Pereira kunye neentshatsheli zeHlabathi zeHlabathi u-Acelino “Popó” Freitas.
Umsitho wawunabaphulaphuli abangama-30% ngenxa yothintelo: abantu abangama-700, kwaye wanyuselwa nguNkskz. Luciene Pontes Coelho, ngelixa uMhloli yayinguMike Miranda Jr.
UIsaac Rodrigues Vs. USergio Santos Dantas
Iirandi ezili-10-Ubunzima bokuKhanya
* Isihloko se-WBC FECONSUR Isihloko-sokuKhanyisa ubunzima (esingenamntu).
Umphathi: UGeyza Caryny.
Indawo: Pará Clube - Belém, Pará, Brazil.
IKomishini: IBhunga leSizwe lezeManqindi (i-CNB) / iBhunga leSizwe lezeManqindi laseBrazil (CNB).
Igama lomnyhadala: UP BOXE SHOW.
* UTatyana Suely Da Costa 100-89.
* UBenedito Balieiro Da Silva 98-91.
* UFernando Balieiro Da Silva 100-89.
Usompempe waye: Everton Moreira Da Silva.
Ngale mini: UDaniel Zaragoza ukhusele isihloko sakhe ngokuchasene noFrank Duarte
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	UDaniel Zaragoza, UFrank Duarte, wbc, Zaragoza vs.Duarte	0
UDaniel Zaragoza vs.Frank Duarte
Iqonga le-Inglewood eCarlifonia, e-USA-nge-31 ka-Agasti ka-1989
Umzantsi waseMexico, uDaniel Zaragoza, ukhusele i-World Boxing Council ubuntshatsheli be-bantamweight, woyisa i-American Frank Duarte, yi-TKO kumjikelo we-10, kwiQonga le-Inglewood eCalifornia. Usompempe yayinguJames Jen Kin. Abagwebi yayinguTomatsu Tomihara, uFrancisco Manzano noNicolas Ascanio.
UKarina Fernandez vs Leticia Uribe UBO igalari yamazwe aphesheya yeefoto
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UFernandez vs Uribe, UKarina Fernández, U-Leticia Uribe, Ukunyusa ixesha lokuhamba, UBO, Ukunyuswa kweManyano, Umbutho waManqindi kwindalo iphela	0
UKarina Fernandez vs. Iifoto zeLeticia Uribe
Uphicotho-zincwadi zikaMasipala e-Ascension, eChihuahua, eMexico 27/8/21
Imifanekiso @jonlexfims / @newdiscoverya
UKarina "La Bella" Fernandez ebegcwele izandla ngoLwesihlanu ebusuku, nge-27 kaAgasti, kodwa wavela ephumelele ukubanga iwonga le-Universal Boxing Organisation ™ (UBO) yeTyhini leSizwe leSuper Bantamweight.
Phambi kokuba phantse kuthengiswe uMphicothi zincwadi zikaMasipala e-Ascension, eChihuahua, eMexico, uFernandez wawukhupha U-Leticia Uribe ngaphezulu kweshumi elineentshukumo kunye nokhuphiswano oluphezulu kakhulu.
Umlo wawubuyela umva, kwaye bobabini abasetyhini babenexesha labo. UFernandez ubukhulu becala yayiye phambili ngelixa i-Uribe izama ukulwa nesibetho, kodwa yaqhubeka nolu hlaselo.
Umlo wagqitywa ngamagorha amabini adiniweyo ashiya yonke into eringi njengoko babehamba ngobhontsi ukuya kumzuzu wokugqibela, kwaye ngelixa kwakukhangeleka ngathi uFernandez wenze owona msebenzi ubonakalayo kwaye kwabonakala ngathi ngumlo osondeleyo.
Kodwa, nangona yayisisigqibo sokwahlulahlula, zontathu iijaji zafumana umlo ngokungummangaliso. Abagwebi uDarlene Zubia kunye noBertha Gaytan babenayo i-100-90 kaFernandez, ngelixa ijaji u-Alfredo Saenz wayifumana enye indlela: 100-90 ye-Uribe.
Ukujonga ngaphaya kwamanqaku angaqhelekanga, kunzima ukuphikisana kakhulu ngokuphumelela kukaFernandez kunye nokuphucula irekhodi lakhe lobungcali ukuya kwi-15-6-1 (3). I-Uribe, ingcono kakhulu kunerekhodi yakhe, iwela kwi-6-18 (0) kodwa inokuzingca ngomzamo wayo.
Umlo ukhuthazwe ziNyuselo zeManyano ngokudibana nePromociones Paquime, kwaye usasaza kwihlabathi liphela kuFacebook
16-1 ubunzima obunzima uMartin Bakole ujongene noHaruna Osumanu ngoSeptemba 18
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Bakole vs. Osumanu, UHaruna Osumanu, UMartin Bakole	0
UMartin Bakole vs. Haruna Osumanu
UMartin Bakole uya kwenza ukubuyela kwakhe kulindelwe kakhulu eringini xa engena UHaruna Osumanu kukhuphiswano olunzima ngoSeptemba 18.
Esi sibini siza kungqubana eDubai kwibhodi engaphantsi kwempixano phakathi komntu oqinileyo-ojika-manqindi-manqindi uThor Bjornsson, kunye nomlo wokulwa nengalo uDevon Larratt, kwaye izakusasazwa ngqo kwiCoreSports.World.
U-Bakole (16-1, 12 KOs) ubuyile kulandela isigqibo sakhe ngamxhelo-mnye ngo-Sergey Kuzmin ngo-December, ephumelela isihloko se-WBC International heavyweight kwinkqubo.
Uchithe iiveki ezimbalwa ezidlulileyo enkampini no-Oleksandr Usyk, phambi komlo wase-Ukraine no-Anthony Joshua kwi-IBF, WBA kunye ne-WBO heavyweight ngoSeptemba 25.
U-Osumanu (11-2, 7 KOs) uphumelele konke ukulwa kwakhe, kwaye wabelana ngendandatho nalowo wayesakuba ngumchasi kaDaniel Dubois uEbenezer Tetteh, kunye nethemba elingoyiswanga laseRussia u-Arslan Iallyev.
Kwenye indawo ekhadini eDubai ngoSeptemba 18, abachasi beCrossFit UJosh iibhlorho kwaye UJacob Heppner ukungqubana, ngelixa ukuthanda kuka-Avril Mathie, uStefi Cohen kunye nabanye bonke besebenza.
UConor Benn: Ndiyeke amanqindi am athethe
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UAdrian Granados, IBenn vs.Granados, IConor Benn	0
IConor Benn vs Adrian Granados
I-Emerald Headingley Stadium, eLeeds, eNgilani 4/9/21
IConor Benn ubeke ukuphoxeka kwakhe kwi-Fight Camp emva kwakhe kwaye ngoku ujolise ngokupheleleyo ekubambeni umboniso xa ekhusela isihloko sakhe se-WBA Continental Welterweight UAdrian Granados e-Emerald Headingley Stadium eLeeds ngalo Mgqibelo kaSeptemba 4, uboniswe bukhoma kwihlabathi liphela kwi-DAZN.
'Umtshabalalisi' wayemiselwe ukuba abambe umnyhadala wokuqala we-Matchroom Fight Camp kwinyanga ephelileyo phambi kovavanyo oluqinisekileyo lwe-COVID-19 wanyanzela umntu wase-Essex ukuba aphume kungquzulwano lwakhe neMexico-American Granados ngoLwesine weveki yokulwa.
U-Benn, ubuso bexesha elizayo lomdlalo wamanqindi wase-Bhritane, wanyusa isitokhwe sakhe ngendlela enkulu emva kokubhujiswa komjikelo wokuqala kuka-Samuel Vargas ngo-Epreli ukuphucula ukuya kwi-18-0 nge-12 knockout, kwaye umntu oneminyaka engama-24 ubudala okhulayo uyazi ukuba enye into eme uloyiso luya kumtyhalela inyathelo kufutshane kwiTayitile yeHlabathi edubuleyo kwicandelo le-147lbs.
UBenn uvumile: “Ndibuyele ekhaya ndikholosile ndingakholelwa. Senze iimvavanyo ezimalunga nesibhozo. Ndandixheleke mpela. Ndasebenza nzima kakhulu kwaye ndinenkampu yokungaboni. Ngokunyanisekileyo kwakubuhlungu kum-ndade ndalila iinyembezi ezimbalwa. Ndiza kuphinda ndibhekane nobunzima kwakhona. Yindlela osabela ngayo kuyo. Into yam ayizukundipasa, ke yiza ngoSeptemba 4 phambi kwama-20,000 XNUMX ndiza kufaka umboniso.
“Bendixhalabile malunga neCovid ende. Abantu abambalwa bandithumelele imiyalezo besithi ndingaqeqeshi nzima kakhulu ngokukhawuleza. Xa ndaphule umhlathi, kwaye ndaye ndanesiqendu sam sokuqala sokubuyisa umva, abantu babesithi, 'uza kuba madolw' anzima, kwaye ndacinga, 'hayi andinguye'. Ukuba iyahamba iyahamba. Ukuba umhlathi wam uyahamba. Andiyi kuba nayo emva kwentloko yam.
“Leyo yayiyindlela yam yokucinga ngoqeqesho. Xa ndenza i-sprints yam kwizitepsi eziseLeigh-on-Sea, ndiyibetha njani iPB yam emva kweCovid? Ndiyibetha njani iPB yam kwimitha emi-5? Andizukutsho ukuba lonke ibilizulu kuba abantu abaninzi bachatshazelwe yi-COVID, kodwa ndisikelelekile ukuba ndiphinde ndabuya ngexesha lalo mboniso mkhulu.
“Andinawo umyalezo weGranados. Andiyi. Akukho nto ithi. Ndiyeke amanqindi am athethe. Yonke into ebithethiwe kumaqela omabini sele ithethiwe ngoku. Ekupheleni kosuku ipromo yenziwe. Konke okuseleyo ukwenza ngoku kukulwa, kwaye uza nge-4 kaSeptemba ukulungele isihogo somlo. Ndiyazi ukuba uza kuyizisa-kodwa loo nto indenza ndihambe. Masibe nayo!
“Ungumfana ozinzileyo noqinileyo, oyena mntu ukumnqandayo nguDanny Garcia. Waphumelela umlo nxamnye Adrian Broner. Wanika isihogo uShawn Porter. Walwa noRobert Easter Jr. Wayengene namakhwenkwe aphezulu, kodwa ukunye nenye inkwenkwe ephezulu. Ndifuna nje ukulwa ngoku. Ndifuna nje ukungena phaya ngoku.
“UVargas uyahamba, 'ewe, awunguye uKhan, awunguye uVergil Ortiz, awunguye u-Errol Spence, awunguye uDanny Garcia', nah ndinguConor Benn. Leyo yindlela yam-ukuba abafuni ukubeka igama lam egameni lam ke ndiza kubenza babeke igama lam. Ekupheleni kosuku ndilwela umlo onzima, kodwa inombolo yakhe ndiyifumene ngosuku lwam olubi. ”
UKatie Taylor: Ndilindele umlo onzima kuJennifer
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UJennifer Han, Katie Taylor, UTaylor noHan	0
Katie Taylor vs.Jennifer Han
UKatie Taylor uthi uyalivuyela ithuba lokwenza ukhuselo lwamva nje lwesithsaba sakhe se-Undisputed Lightweight phambi kwabalandeli abathandekayo abangama-20,000 2 beLeeds e-Emerald Headingley Stadium kwi-blockbuster yaseLara vs Warrington 4 khadi ngalo Mgqibelo we-XNUMX kaSeptemba, eboniswe bukhoma kwihlabathi liphela kwi-DAZN.
Inkwenkwezi yaseIreland (18-0, 6 KOs) kwanyanzeleka ukuba imbe nzulu njengoko igcina iiTayitile zeHlabathi ngokuphumelela kwisigqibo ngazwinye emva kwenye intlanganiso engalibalekiyo noNatasha Jonas okokugqibela eManchester Arena ngoMeyi- iminyaka esithoba ukusuka eLondon ngo-2012 Imidlalo yeOlimpiki.
Ngeli xesha uTaylor ubeka amabhanti akhe emgceni ngokuchasene neentshatsheli ze-amateur zikazwelonke izihlandlo ezithandathu kunye nowayesakuba yi-IBF Featherweight World Champion UJennifer Han (18-3-1, 1 KO) -Umceli mngeni wakhe osisinyanzelo mvanje oza kungena kule mpelaveki kungquzulwano ngasemva komlo osibhozo ophumeleleyo.
Utata wazalelwa wakhulela eLeeds, ke sonke sakhula singabalandeli beLeeds United, utshilo uTaylor. “Basekho abalandeli beLeeds United phaya ngaphandle! Ndonwabile ngokwenene ukulwa eLeeds naphambi kwabalandeli abaninzi. Kufana nekhaya lesibini kum ke andinakulinda. Iya kuba ngumdlalo wamanqindi onomdla phambi kwabantu abangama-20,000 XNUMX. Umoya ojikelezayo uza kuba uphambene. Abalandeli beLeeds banomdla kwaye bayangxola.
“Ndicinga ukuba iinyanga ezili-12 ezidlulileyo bezimnandi kum. Ndisahleli apha njengeChampion engenakuphikiswa, i-18-0 inemidlalo emnandi kunye nemilo emangazayo phantsi kwebhanti lam. Imilo endikhe ndayiqhuba inyuse amanqindi amanina aya kwelinye inqanaba. Le yeyona nto iphambili kumdlalo wamanqindi oqeqeshiweyo - ubambe zonke iibhanti, yiyo yonke into ayifunayo umntu kumdlalo wamanqindi oqeqeshiweyo. Iphupha lakhe wonke umntu kukuba abe yintshatsheli engenakuphikiswa.
“Ndizakuzama ngako konke okusemandleni ukubamba onke amabhanti ixesha elide kangangoko ndinakho. Yile nto ndikulo mdlalo. Ndifuna ukwenza imbali, ndifuna ukuba yiNtshatsheli yeHlabathi kwaye ndifuna ukubamba onke amabhanti - ndingenile. iimilo. Ndiyayithanda loo nto malunga nabalwi babafazi. Ngokwenyani sifuna iimfazwe ezinkulu. Sizimisele kwaye siyakwazi ukunyathela eringini kwaye silwe nazo zonke ezi ntshatsheli.
“Ndilindele owona mlo unzima kuJennifer. Unamava amaninzi e-amateur kwaye ulilungu lobuchwephesha. Ungumdlali weHlabathi wexesha elithandathu. WayenguNombolo 1 onyanzelekileyo ngokunjalo ke kwafuneka ndiwuthathe umlo. La mantombazana aphakamile - abhokile ngaphaya kwawo, baphakamisile umdlalo wabo nxamnye nam. Ndilindele umlo onzima kakhulu kwaye ndiza kuzilungiselela njengokuba bendilwela umlo ngamnye endikhe ndanawo kule minyaka imbalwa idlulileyo.
“Ungumlwi okholelwa kuye. Lo mlo uza kuzisa okona kulungileyo kuthi sobabini. Ndiyayithanda inyani yokuba ungena kumsesane ngokuzithemba njengam. Andiqwalaseli kangako ukuba bathini abanye abalwa, ndigxile ekusebenzeni kwam nasekuzilungiseleleni. Siza kungena kwiringi eyi-100% elungisiweyo. Kuphela kwamagama abalulekileyo, 'kwaye nangoku'. Uqeqesho luhamba kakuhle- ndiziva ndilungile kwaye ndibukhali. Andilindanga ukuba ndingenelele kwakhona ngoSeptemba 4 kwaye ndiphumelele. ”
UAndres Campos ubona ukungqubana kweNakatani kwiinyanga ezili-12
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UAndres Campos, Ingwenya yaseChile, Dragon Fire Boxing, UJunto Nakatani, UTony Tolj	0
Ingwenya yaseChile iAndres Campos iyakhula kwicandelo le-flyweight, kunye noMzantsi Melika ohlonitshwayo ngoku uhleli kwinombolo yesi-5 kumanqaku ehlabathi eWBO.
I-Campos, ekhokelwa ngumdlalo wamanqindi wase-Australia kahuna Tony Tolj's Dragon Fire Boxing uhlala exakekile ngaphandle kwezithintelo zehlabathi ze-COVID, esebenza njengeqabane elithandanayo kubo bobabini abantakwabo Moloney eLas Vegas ngaphambi kokhuphiswano lwabo ngo-2020 nango-2021. up ukuphumelela kwilizwe lakhe laseChile ngelixa elindele ukubuya kweringi.
Ummi wase Mzantsi Melika uxoxe ngexesha lakhe ekampini iMoloney. Uthe, “Ndichithe ixesha elininzi nabazalwana bakaMoloney, e-Australia naseMelika. Ndinombulelo kakhulu kuTony Tolj kunye namawele ngokundivumela ukuba ndiye kwiinkampu zoqeqesho. Bakwinqanaba le-elite nakwinqanaba endifuna ukuba kulo, ukuze bafunde kwaba balwi babalulekileyo kubaluleke kakhulu kuphuhliso lwam njengengcali.
“UAndrew noJason ngamagorha ahlukileyo, kukho umahluko olungileyo kuzo zombini iiseti zobuchule. Ndifumanise ukuba ngaphandle kweenkampu babenazo izinto ezifana no-Inoue noFranco. Akukho mabali abuhlungu kolu hlobo lweenkampu zoqeqesho. Imalunga nokusebenza nzima. Ke xa uspar kunye nabo kuya kufuneka ukuba ube ngowona ungcono okanye uya kufumanisa. Ndiyakholelwa ukuba uAndrew uza kuba yintshatsheli kwakhona kwaye ndiyakholelwa ukuba uJason uzakuba yintshatsheli yehlabathi. ”
Ngamava eenkampu zetayitile zehlabathi ezisekwe kwilizwe liphela, uCampos ngoku ubeka iliso lakhe ekulweni kwihlabathi liphela, ngeenjongo zokuba yintshatsheli yehlabathi uJunto Nakatani. Uneminyaka engama-24 ubudala waxoxa ngamathuba akhe okufumana isihloko sehlabathi ngo-2022.
Uthe, “Ndiyakholelwa ukuba kuyinyani ukujolisa kwiintshatsheli zehlabathi. Ndihleli phezulu kumgangatho wehlabathi ngoko ke ndifuna ukulwa eyona ilungileyo kwihlabathi. Ukuba kukulwa noJunto Nakatani oko kuya kuba liphupha elizalisekayo. UNakatani ngumlo-mkhosi omangalisayo kwaye ingayimbeko yokwabelana ngeringi nentshatsheli enkulu kangaka.
“Sendikuqhela ukuhambahamba kwihlabathi jikelele kumdlalo wamanqindi, ndingavuya ukuba ndingayenza le nto yokulwa abadlali abafana neNakatani. Okwangoku ndifuna ukulwa nomntu onokundisondeza ekubeni yintshatsheli yehlabathi, leyo injongo yam kwaye ndiyakholelwa ukuba ndingayifikelela ngaphambi konyaka wama-2023. I-United States, iJapan okanye kwenye indawo. Ndineiglavu kwaye ndiza kuhamba. ”
30 EyeThupha 2021
UCharles Conwell woyisa uJuan Carlos Rubio eCleveland, eOhio, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UCharles Conwell, IConwell vs Rubio, NGUJUAN CARLOS RUBIO	0
UCharles Conwell vs Juan Carlos Isiphumo seRubio
I-Rocket yeMortgage Field Indlu e-Cleveland, e-Ohio, e-USA 29/8/21
IOlimpiki yaseMelika UCharles Conwell (16-0, 12 KOs) Waqhubeka nesiqalo esimangalisayo kwikhondo lakhe lobungcali ngokugqwesa iMexico eyayingafakwanga ngaphambili UJuan Carlos Rubio (18-1, 9 KOs) ukufumana amanqaku kumjikelo wesithathu we-TKO kulungelelwaniso lwe-10-round super welterweight bout.
UTommy Fury woyisa u-Anthony Taylor eCleveland, eOhio, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	U-Anthony Taylor, Ubushushu ngokuchasene noTaylor, Ubushushu bukaTommy	0
UTommy Fury vs Anthony Taylor Iziphumo
UTommy Fury (7-0, 4 KOs), ubhuti omncinci weqela elinzima leentshatsheli uTyson Fury, wenze ngempumelelo ukubonakala kwakhe e-US ngokufumana amanqaku kumjikelo wokuvalwa komkhosi wamagorha omlo U-Anthony Taylor (0-2). Sele eyinkwenkwezi ye-crossover emva kokuba egqibe imbaleki kumdlalo we-UK okwenyani we-TV "Love Island", uFury wenza umbono wokuqala kubaphulaphuli baseMelika ngaphakathi kwendandatho kodwa akakwazanga ukufumana amanqaku enkqonkqozo awayekulangazelela.
"Bendicinga ukuba ndenze kakuhle," utshilo uManchester, oneminyaka engama-22 ubudala, waseNgilani. “Awungekhe ulibale ukuba bendinemilo eli-10 kuphela engahlawulwayo kwaye utata wam ebengekho nam ngobu busuku. Ndibe nexesha elimnandi ndisilwa phambi kwabo bonke aba bantu bathandekayo. Ndingumqali kulo mdlalo kwaye ndiyazi ukuba kufuneka ndisebenze kuyo yonke into. Andikho ndawo kufutshane nemveliso egqityiweyo. Ndifunda yonke imihla kwaye ndinombulelo ngokuba lapha ndisempilweni kwaye ndithetha nawe. ”
Ubushushu basebenzise ukuphakama kwakhe kwaye wafikelela kwinzuzo ukongeza kwisakhono sakhe esiphezulu somdlalo wamanqindi kumhlaba weepesenti ezingama-46 zamandla akhe kumlo owayesakuba ngumlobi weBELLATOR MMA u-Taylor, owayekhuphisana kumdlalo wamanqindi wobungcali okwesibini kwikhondo lakhe lokuqala kwaye okokoko Umsindo ngoku unethemba lokudlala uloyiso lwakhe kwi-matchup noJake Paul.
“UJake Paul kufuneka abe nobusuku obulula ngokuchasene nam, akunjalo? Akanasizathu sokungalwi. Masiyifumane kuJake Paul. ”
IMontana Love yoyisa u-Ivan Baranchyk eCleveland, eOhio, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UIvan Baranchyk, Uthando vs. Baranchyk, MONTANA UTHANDO	0
IMontana Love vs.Iziphumo zeIvan Baranchyk
SikaCleveland IMontana Love (16-0-1, 8 KOs) ufumene i-TKO ekhohlakeleyo kwi-ntshatsheli yangaphambili UIvan Baranchyk (20-3, 13 KOs), kuchulumancisa abalandeli bedolophu ababemi ngeenyawo ngexesha lesenzo esigcweleyo slugfest.
I-Southpaw Love yafaka i-uppercut yasekhohlo kwimizuzwana yokuvala yomjikelo wesixhenxe, yathumela iBaranchyk kwinqanawa. Ngelixa u-Baranchyk odikidikiweyo ebetha amanani alishumi, umqeqeshi uPedro Diaz wazisa usompempe uLonnie Scott ukuba akafuni ukuba umlweli wakhe aqhubeke kumjikelo wesibhozo. Ngexesha lokumiswa, Uthando lwaluphambili kuwo omathathu amakhadi amanqaku.
"Eli liphupha lizaliseka," utshilo uThando oneminyaka engamashumi amabini anesithandathu emva komlo. “Ndikuqeqesho lwemihla ngemihla ndicinga malunga nokujonga lo mzuzu. Ndifuna ukubulela u-Ivan ngokundinika eli thuba kwaye nokusinceda ukuba sinike abalandeli umboniso omkhulu. Besisoloko sisebenza kuloo phephethi ngalo lonke ixesha loqeqesho. Isicwangciso somdlalo yayikukuhamba kunye nebhokisi kuye kwaye simenze ukuba aphoswe. Sasisazi ukuba uza kuvuleka. ”
Yeyiphi eyona nto intle yokusebenza kukaLuthando, wabonisa amandla, ukuchaneka nokuzikhusela. Ubambe iipesenti ezingama-44 zamandla akhe okubamba ngelixa ebambe iBaranchyk ukuya kuthi ga kwiipunch ezingama-45. Uthando lwenzakalise uBaranchyk, intshatsheli yokubetha ngamandla eyabandakanyeka kwimfazwe yoNyaka yoNyaka ka-2020, amatyeli aliqela kulo lonke umlo ngesandla sasekhohlo. Uthando ngoku lukholelwa kwelokuba lulungele ezona zibalaseleyo kwicandelo leepawundi ezili-140.
“Ndibhinqe. Besisebenza nzima ngoku lixesha lam. Ndifuna uJosh Taylor kunye noGervonta Davis. Bafake umgca kwaye singenza ukuba kwenzeke, ngokukhawuleza. ”
UDaniel Dubois woyisa uJuiseppe Angelo Cusumano eCleveland, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UDaniel Dubois, UDubois vs Cusumano, UJUISEPPE ANGELO CUSUMANO	0
UDaniel Dubois vs.Juiseppe Angelo Cusumano Isiphumo
Uthembisa umntu oza kubambana nobunzima baseBritane UDaniel Dubois (17-1, 16 KOs) yenza i-US yakhe yokuqala ngesitayela, enkqonkqoza phantsi UJuiseppe Angelo Cusumano (19-4, 17 KOs) Amaxesha amathathu kwindlela eya kumjikelo wokuqala wokumisa. UDubois wafika phantse kuyo yonke into ayiphosa ku-Cusumano owayengaphezulu, owagqitywa ngumgqomo wee-punches 2:10 emfazweni.
UDubois ngoku uphumelele imilo emibini ilandelelana okoko wehlisileyo kukhuphiswano olulodwa kuJoe Joyce ongoyiswanga kumlo onomdla we2020. Ngelahleko kumbono ongasemva, i-Dubois ngoku ijonge phambili kwimilo emikhulu kunye nephucukileyo.
UDubois wathi: “Akuhlawulwa ngexesha elongezelelekileyo. “Ndiqhube kakuhle kakhulu kwaye ndinenkampu yoqeqesho ebalaseleyo. Ndifuna ukulwela isihloko sehlabathi. Ndifuna ukulwa neyona nto ibalaseleyo. Iza kuza kungekudala. Nabani olandelayo. Ndifuna ukulwela intshinga yehlabathi. ”
UJake Paul woyisa uTyron Woodley eCleveland, eOhio, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Jake Paul, UPaul vs. Woodley, Tyron Woodley	0
Jake Paul vs Isiphumo seTyron Woodley
Eyona nkwenkwezi intsha yamanqindi UJake "Ingxaki Yomntwana" UPaul uqhubeke nokunyuka kwakhe ngokukhawuleza ngaphakathi kwezemidlalo ngeCawa ebusuku, efumana amanqaku okuphumelela kwisigqibo se-UFC Champion UTyron "Onyuliweyo" uWoodley phambi kwesixuku esithengisiweyo sabalandeli abali-16,000 kwiRocket Rocks yeMortgageHouse eCleveland, eOhio bahlala kumdlalo we-SHOWTIME PPV.
Abagwebi bafumana amanqaku angama-78-74 kunye nama-77-75 kaPaul, kunye nama-77-75 kuWoodley.
"Andazi ukuba ndithini - wayengumchasi onzima kwaye ebesilwa iminyaka emininzi kakhulu kwaye ndisemtsha kule nto," utshilo uPaul, umdali owaziwayo womxholo onjengehobe kwilizwe lemfazwe nje iminyaka emithathu. eyadlulayo. “Imilenze yam ibingaqhelekanga, bendingazi ukuba yintoni ingxaki yam. Yonke intlonipho kuTyron nangona. UyiHolo yeNzululwazi kwaye walwa umlo olungileyo. Andinanto ngaphandle kokumhlonipha. Akukho mvakalelo inzima. Kuyamangalisa ukukwenzela isixeko sam kwaye liphupha elizalisekayo. ”
Emva kweeveki zokwakhiwa, kubandakanya neveki yomlo, uPaul noWoodley batshintshana ngamanqindi okwenyani kwaye uWoodley linyathelo elicacileyo elivela kubachasi abathathu bakaPaul bangaphambili, bebeka isoyikiso okokuqala ebomini bukaPaul. Umntu oneminyaka engama-39 ubudala owayedlala umdlalo wakhe wamanqindi wawela kwelona thuba lakha lalibaluleke kakhulu ebusuku, wanyikima uPaul ngelungelo eligqithisileyo elathumela uPawulos kwiintambo. Kodwa yayinguPawulos owayekhuthele ngakumbi. Ukhuphe uWoodley 71-52 kwizibonda ezipheleleyo, ngelixa uWoodley wamkhuphela ngaphandle uPaul ngamandla ngo-41-35.
"Undibethe ngompu omnye umlo wonke, kwaye ibiyinto entle leyo," utshilo uPaularing. “Yayiyinto enye elungileyo. Andazi ukuba enye ijaji yabona ntoni. Kodwa ke ndisalufumene uloyiso. Ukuze ndize apha ndihambe imijikelo esibhozo kumlo wam wesine, ngubani owenza loo nto? Ndenza izinto ezingazange zenziwe. ”
Owayesakuba yintshatsheli ye-UFC Welterweight uWoodley, owenza izikhuselo ezihlanu zebhanti yakhe, wayekholelwa ukuba wenze ngokwaneleyo ukuphumelela kumdlalo wakhe wamanqindi oqeqeshiweyo.
"Ndiva ngathi ndiphumelele umlo," utshilo uSt. Louis 'Woodley. “UJake lelinye iqela elichasayo. Bendingamlindelanga ukuba angatya amanqindi am ngoluhlobo. Kodwa inyani yokuba ijaji enye indinike imijikelo emibini iphambene. Ulibale ukuba uTommy Fury ulwa. Masibaleke sibuyele umva. Akukho mntu uza kuthengisa i-PPV njengathi. Iintsontelo bezimphakamisile xa ndimbetha. Ndingayifumana loo knockout. Ndiye ndahamba naye ndehla ndabuya umva amaxesha ngamaxesha. Ndigalele amanqindi ombane, waphoswa ukudubula ubusuku bonke. ”
ULeonardo Carrillo woyisa uNixon Ankuash weWBA Fedelatin eFlorida
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	ICarrillo vs Ankuash, ULeonardo Carrillo, UNixon Ankuash, WBA	0
ULeonardo Carrillo vs Nixon Ankuash
ILos Andes Mall, kwisiXeko sasePanama, eFlorida, e-USA 28/8/21
ULeonardo Carrillo iphumelele i-World Boxing Association (WBA) yeFedelatin isihloko se-super bantamweight ngokuphumelela u-Ecuadorian kumjikelo wesihlanu. UNixon Ankuash NgoMgqibelo ebusuku.
Umlo obubanjelwe eLos Andes Mall, kwisiXeko sasePanama, ubugcwele isenzo esihle kodwa kwasekuqaleni kwabonakala ukuba iColombia yayinezixhobo ezingaphezulu zokuphumelela ibhanti yengingqi engenanto yombutho woovulindlela.
UCarrillo, ohlala ePanama, uhlasele umdlali wakhe ngokudibanisa okuhle kwaye wamdiliza kancinci kancinci de wafumana i-knockout yobuchwephesha kumjikelo wesihlanu.
Umphumi-mkhosi oneminyaka engama-28 uhlala engaphumelelanga ephumelele i-14, eyoku-1 kunye neye-7 ngelixa u-Ankuash eye wawisa irekhodi lakhe kwi-7 ephumeleleyo, i-2 ilahleko, i-1 draw kunye ne-3.
UCesar Juarez woyisa uDennis Contreras weWBA Fedecentro isihloko eFlorida
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UCesar Juarez, UDennis Contreras, IJuarez vs. Contreras, WBA	0
UCesar Juarez ngokuchasene noDennis Contreras
Iziko leMicimbi yeWhitesands kwiSixeko sasePlant, eFlorida, e-USA 28/8/21
UCesar Juarez Ubusuku bakhe obukhulu kwiZiko leMicimbi yeWhitesands kwisiXeko sasePlant, eFlorida, ngesigqibo esiphumelele ngazwi linye UDennis "Martillo" Contreras, Ukuthatha i-World Boxing Association (WBA) yeFedecentro featherweight isithsaba kuye.
Kumlo wamagorha aseMexico, uJuarez wafumana amakhadi ka-96-94, 96-94 kunye no-97-93, athintela uContreras ekukhuseleni isihloko senqila okwesihlandlo sesithathu okoko waphumelela ngo-Agasti 2020.
Yayiyinto eyonwabisayo kakhulu apho kwakukho unaniselwano oluninzi kodwa ubunzima bezandla zikaJuarez babuthatha isigqibo sokufaka izikali ecaleni lakhe.
Kwiminyaka engama-30 ubudala, eli gqala laphumelela umlo wesibini ngokulandelelana kwaye lafumana isihloko esimncedayo ukuba afumane ikhondo lomsebenzi wakhe. Yayiyimpumelelo yama-27 kuye, ukoyiswa ezili-10 kunye nokubethwa okungama-20. I-Contreras, kwelinye icala, inerekhodi ye-24 iphumelele, i-11 ilahleko, i-1 draw kunye ne-22 knockout.
UKim Clavel woyisa uMaría Soledad Vargas eMontreal, Canada
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UClavel vs Vargas, UKim Clavel, UMaria Soledad Vargas, wbc	0
UKim Clavel noMaría Soledad Vargas
IGA Stadium eMontreal, Canada 28/8/21
Canadian UKim Clavel woyisa iMexico UMaría Soledad Vargas, ukoyisa isithsaba se-WBC Silver esikhanyayo esingenamntu, kwisiganeko esiphambili sekhadi ebelibanjwe ngalo Mgqibelo kwibala le-IGA eMontreal, Canada.
Kwakungumlo okwinqanaba eliphezulu kakhulu apho uClavel wabonisa inqanaba lakhe lehlabathi. Walilandela ngokupheleleyo icebo lomqeqeshi wakhe, uDanielle Bouchard.
UClavel uphumelele ngamakhadi ka-98-92, 99-91 kunye no-99-91. Ngale mpumelelo, uClavel wayiphucula irekhodi lakhe laya kwi-14-0, 2 knockout, ngelixa uVargas eshiye iringi eneerekhodi ze-15-3-1, 1.
UMalik Zinad woyisa uAlmir Skrijelj kwiWBC isihloko seMeditera eBrussels
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	UAlmir Skrijelj, UMalik Zinad, wbc, Zinad vs Skrijelj	0
IMalik Zinad vs Almir Skrijelj
EBrussels, eBelgium 28/9/21
Kule mpelaveki eBrussels, eBelgium, engoyiswanga UMalik Zinad (18-0-0, 16 Ko's) yaseLibya, yoyisa iMontenegro UAlmir Skrijelj (13-3-0, 8 Ko's), ukuphumelela itayitile engenanto yokukhanya kobunzima obunzima kwiBhunga lezeManqindi yeHlabathi.
Umdlalo uqale ngawo omabini amaqela okulwa, kodwa uZinad ubonise ezona zakhono zibalaseleyo kumdlalo wamanqindi kunye nokongama. Iziphumo zomlo zafika kwimizuzwana engama-57 kumjikelo wesithathu nge-TKO.
UMalik uthandwa kakhulu eLibya, nanjengoko engomnye wezithembiso ezikhulu zomdlalo wamanqindi kwela lizwe.
Umphathi walo mlo wayengu-Sekela Mongameli we-WBC kunye noMongameli we-ABU, u-Houcine Houichi, wase-Tunisia.
UJoe Eli Hernandez woyisa uJosé Luis Espinosa eTamaulipas, eMexico
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	ASP Ibhokisi, IHernandez vs. Espinosa, UJoe Eli Hernandez, UJosé Luis Espinosa, wbc	0
UJoe Eli Hernandez ngokuchasene noJosé Luis Espinosa
IMatamoros, Tamaulipas, Mexico 28/8/21
Kule mpelaveki ikhadi "Ubushushu eMatamoros" belibanjelwe kwisixeko saseMatamoros, eTamaulipas, eboniswe yi-ASP BOXINIG, apho bekuziswa khona amanqwanqwa aphezulu asibhozo.
Kwidabi eliphambili UJoe Eli Hernandez lisiwe UJosé Luis Espinosa kwimijikelo emibini ephumelele ibhanti ye-FECOMBOX Silver welterweight evunywe liBhunga lezeManqindi yeHlabathi.
UAmanda Serrano ugcina izihloko ngokuchasene neYamileth Mercado eCleveland, e-USA
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi, Umdlalo wamanqindi owasetyhini	UAmanda Serrano, Serrano vs Mercado, wbc, Yamileth Mercado	0
"Irokhethi yokuBambisa impahla ngeRocket" yaseCleveland, eOhio, e-USA 29/8/21
Intshatsheli yeWorld Boxing Council, uPuerto Rican UAmanda "Umsebenzi wenene" Serrano, ngokulibalekayo nangempumelelo ibhanti lakhe, ngokoyisa intshatsheli ye-WBC super-bantamweight, Yamileth MercadoIsigqibo ngamxhelo-mnye, ngale Cawa “eRocket Rocket Mortgage Fieldhouse” yaseCleveland, eOhio.
Le yimijikelo eli-10 yesenzo esinzulu, apho uSerrano ahambisa khona ukusebenza okulawulwayo kunye nobushushu, kunye ne-jab esemazantsi e-jab, edityaniswa nokuntywila komzimba kunye namalungelo anzima entloko, ukufumana uloyiso: 97-93, 98-92 kunye Amakhadi amanqaku angama-99-91.
Ukusuka kwentsimbi yokuvula, u-Amanda Serrano waphuma waya kulawula, ethatha ulawulo lomlo, ehlasela ngokudityaniswa okukhawulezayo kwaye evala ngokungenatarhu umgama. U-Yamileth, owanyanzelwa ukuba abuyele ngasemva, kwafuneka asebenzise bonke ubuchule bakhe. Lonke ikhredithi ku "Yeimi" ongoyikiyo, wenyuka ubunzima, enika ubude, ubunzima bendalo kunye nokufikelela. Inzuzo yakhe yayikukuba, xa wayeneminyaka engamashumi amabini anesithathu, wayeneminyaka esithoba ubudala emncinci.
Njengoko wathembisayo, uphucule ukusebenza kwenyawo kunye nobuchwephesha, esilwa nokugungxula itama lase-Amanda lasekunene, kwiindleko zokudumba nokusika icala lasekhohlo lobuso bakhe kunye nempumlo enegazi. Emva kokudlula kunye nokuza kumjikelo wesithoba we-torrid, wenzakaliswa ngamalungelo amabini okuhamba ngokuthe ngqo kumjikelo weshumi nowokugqibela. Ubukroti obukhethekileyo obuqiniswe yimeko entle yomqinisile kwaye… wayichukumisa, wala nje ukuhla!
Ngolu loyiso, "iNtsebenzo yokwenyani" uSerrano uqinisekisiwe njengomnye wabalwi abaphambili kwilizwe leponti, ukuphucula irekhodi lakhe ukuya kwi-41-1-1, nge-30 knockout. IMercado, kwelakhe icala, ngoku inerekhodi ye-18-3, 5 knockout. Wayenomdla wokuthatha lo mlo, xa abanye bengazange!
"BendinamaMexico anzima phambi kwam ngobu busuku," utshilo uSerrano, umhlali waseBrooklyn, NY ozelwe eCarolina, ePuerto Rico. Uyintshatsheli kudidi lwakhe lobunzima, kodwa ndiyathemba ukuba ndenze wonke umntu waziqhenya kwaye wonwabile kwaye ixesha lokubonisa liza kundibuyisa kwakhona. Ndiyathemba ukuba ndibenze abanye baba bantu balapha bathanda amanqindi amanina kwaye ndawenza umdlalo waziqhenya. ”
"Ndifuna umlo noKatie Taylor kwixesha elizayo," utshilo. “Okokuqala ndifuna ukulwa nezinye iintshatsheli ze-featherweight kwaye ndingaphikiswa kudidi lwam lobunzima. Emva koko siza kuba neentshatsheli ezimbini ezingenakuphikiswa xa sisilwa noKatie. ”
Ngale mini: UMexico waseGilberto waseRoma ukhusele isihloko sakhe sehlabathi
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	UGilberto Román, Ngale mini, USantos Benigno Laciar, wbc	0
UGilberto Roman ngokuchasene neSantos Benigno Laciar
ICordoba, eArgentina-Agasti 30, 1986
WaseMexico UGilberto Roman Ukhusele ubuntshatsheli be-WBC superweightweight boyisa umceli mngeni waseArgentina USantos Benigno Laciar ngu-UD. Umlo wenzeka eCordoba, eArgentina. Usompempe yayingu-Ismael Quiñones Falú. Ngelixa iijaji zazingu-Moises Dade, Tony Perez kunye no-Angel Luis Guzman.
Umdlalo wamanqindi uyaqhubeka ukhula eIndiya
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UArif Khan, Narwat vs. Kumar, URahul Kumar, USagar Narwat, wbc	0
ICrowne Plaza eGreater Noida, eIndiya 3/8/21
Ngokuduma nokuthatha inxaxheba, amanqindi ayaqhubeka nokukhula ngokukhawuleza kwilizwe laseIndiya. Ukusukela oko ukuvalwa kwanyenyiswa ngoSeptemba 2020, ilizwe libambe iminyhadala engama-20- kwaye ayikhange iqatshelwe yiWBC. Babona amandla amakhulu kwilizwe elinabemi abangaphezu kwesigidi esinye sezigidi. Yiyo loo nto ukusekwa kweKomiti ye-WBC yase-India kunye nezihloko zobuntshatsheli.
Ukongeza kwikhonkco elonyukayo lase-India kwiBhunga lezeMidlalo yezeMidlalo yezeMidlalo yezeMidlalo yezeMidlalo, siza kubona iBhunga lezeMidlalo yezeMidlalo yezeMidlalo ye-WBC lase-Asia elalikhuphisana nge-3 kaSeptemba eCrowne Plaza eGreater Noida. Umnyhadala oboniswe simahla kwisitishi se-YouTube sePunch Boxing, ubona umceli mngeni weSagar Narwat uRahul Kumar, webhanti elingenamntu leSuper-Welterweight.
U-Arif Khan, owayekhuthaza umdlalo ozayo, wayechulumancile kukhuphiswano lomdlalo weli: “Ndiyazingca kakhulu ngokubamba iwonga le-WBC Asia Boxing Council kwilizwekazi le-Punch Boxing. I-Sagar xa ithelekiswa noRahul iya kuba ngumlo osondeleyo kwaye onomdla. Masibone ukuba ngubani ophumeleleyo!
“Ekugqibeleni, ngumdlalo wamanqindi eIndiya ophumeleleyo. Sinqwenela ukuba imilo emininzi kakhulu ize kwilizwe lethu nakwiPunch Boxing. ”
USagar Narwat (12-1-1), ngokungathandabuzekiyo yenye yeembethi manqindi ezidumileyo eIndiya, uphawule wathi: “Kungumlo wam wokuqala wompetha eIndiya, kodwa sisiqalo nje - ndiyathemba ukuba ndizakulilwela intshinga yehlabathi kungekudala. Ndibamba ngazibini kwiPunch Boxing ngayo yonke inkxaso endindinike yona. ”
Kwenye indawo ekhadini lokulwa, uHarsh Gill (4-0) onobunzima ongabethwanga uya kubuyela eringini njengoko ejonge ukuqhubeka nesiqalo esihle kwikhondo lakhe lobungcali. Lilonke, izihlandlo ezilithoba zobuchwephesha ziya kwenzeka ngalo lonke ixesha langokuhlwa kwinto ehlawulwayo njengobusuku obonwabisayo bokulwa ehotele eNtofontofo yaseGreater Noida.
Ukubukela uSagar Narwat vs Rahul Kumar simahla, vula isiteshi se-Punch Boxing se-YouTube ngolwesiHlanu umhla wesi-3 kuSeptemba, ngo-5 emva kwemini nge-Indiya.
Ngaba uDmitry Bivol usetyenziswa njengopopi?
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	NguDmitry Bivol, UEddie Hearn, umdlalo wamanqindi	0
Ngaba uDmitry Bivol ngumlo nje 'ovimba'?
Uninzi lukholelwa ukuba liQela leMidlalo yezeManqindi yeHlabathi (WBA) NguDmitry Bivol (I-18-0, i-11 KOs) isetyenziswa njengopopayi ngu-Eddie Hearn we-Matchroom Boxing, ukuthintela uGilberto “Zurdo” Ramirez ongoyiswanga (42-0, 28 KOs) kwimiceli mngeni yaseBivol kwidabi labaphumeleleyo, abalwi behlabathi.
Ndiyazi ukuba iqela lam linyanzela lo mlo kodwa okwangoku asizukuva kuDmitry okanye kwiqela lakhe, utshilo uRamirez. “Andiqinisekanga ukuba uyathulwa na kodwa kufuneka akhumbule ukuba ungumlwi kunye nelizwi lokwenza izinto zenzeke. Ngaphambi komlo wam wokugqibela, wakrwada wabiza lo mlo, kodwa ngoku uthule radio. Andiqinisekanga ukuba ufuna imvume kwabaphezulu kodwa, ngethemba, akasetyenziselwa nje ukutya kweenkanunu. ”
Ukuqala kwalo bhubhani, uBivol noRamirez, owayesakuba yintshatsheli yeWorld Middleweight World (WBO) Super Middleweight, bathetha ngokuphandle ngokulwa omnye nomnye kwimbambano enkulu.
"UGilberto Ramirez ngomnye wabadlali abaphambili kwicandelo le-heavyweight," utshilo uBivol. “Sithethile ngalo mlo ixesha elide. Lifikile ixesha lokuzisa oku. Siye saqeqeshwa kunye kwaye abanye bayasinda ngokunjalo. Uyingcali kwaye uyindoda. Umlo olungileyo.
“Yintshatsheli eyayisakuba lihlabathi, uzibonakalisile ukuba ungoyena ubalaseleyo, imilo efana nale iyabavuyisa abalandeli. Yiyo le nto emalunga nomdlalo wamanqindi, abo balwayo apho imbethi manqindi inethuba leepesenti ezingama-50 lokuphumelela. Sobabini bakwinqanaba esinokulwa umlo onamandla ngalo. ”
"Ndicinga ukuba lo ngumlo omkhulu kumdlalo wamanqindi," utshilo uRamirez, "icandelo lesisindo esinzima, kwaye ekugqibeleni abalandeli. Kukho imbali emnandi kumdlalo wamanqindi waseMexico naseRussia kwaye siyathemba ukuba le yinto ezisa uchulumanco emva kwinqanaba elinobunzima. Ngaphaya koko, ndiyakholelwa ngokobuqu ukuba iBivol yeyona ntshatsheli inzima kwaye ilwa ngalo mzuzu, kwaye ndiyathemba ukuba le mpi yokulwa ikukuphela kwayo endikwiingxoxo zokuya phambili. Kwaye sithethe ngayo iminyaka emibini ngoku, kwaye lixesha lokuba yenzeke.
“UBivol ngumlo omkhulu kwaye ndiyazi ukuba lo ngowona mceli mngeni mkhulu. Ndiwubonile umdlalo wakhe uphucuka ngalo lonke ixesha sidibana eringini. Wenza yonke into kakuhle. Uyakhawuleza ngeenyawo zakhe kwaye uphosa indibaniselwano enkulu yamandla. Kwangelo xesha, uzisa i-IQ ephezulu kwindandatho, ehlala isenza ukuba kube ngumceli mngeni. Akayintshatsheli yehlabathi nge-fluke okanye uyilo. Lo mfana mhlawumbi ngomnye wamajoni aqeqeshekileyo endakha ndawabona ethubeni. ”
Ngaphambi nasemva kokuphumelela kukaRamirez kutshanje kukaSullivan Barrera (22-3, 14 KOs), uBivol wanqwenela uRamirez ngethamsanqa ngethemba lokuba bangalwa kamva kulo nyaka, kwaye kwabonakala ngathi kukutshixa. Ngesiquphe, nangona kunjalo, iBivol yatshintsha iigesi kwaye yacela umngeni kwi-WBA kunye ne-WBC Super Middleweight Champion "uSaul" Canelo "Alvarez (56-1-2, 38 KOs), nokuba ziiponti ezili-168 okanye ezili-175. URamirez waqonda, eqonda ukuba "uCanelo" ngumenzi wemvula wamanqindi.
Xa uBivol waqonda ukuba akafumani mlo no "Canelo," endaweni yokuba abuyisele ingqalelo yakhe ekulweni "uZurdo," wahamba emnyama kwaphela.
Ngoba? Iinkwenkwezi zilungelelanisiwe kwaye uBivol kunye noRamirez bobabini bayafumaneka njengoko kungekho mlo uzayo, ukongeza kuwo omabini amajoni athe alwa kwi-DAZN, enemitya elawulwa nguHearn.
Ngaphandle kwendawo, uHearn ubhengeze kwiveki ephelileyo ukuba ufuna ukutshatisa iBivol ngo-Okthobha e-O2 Arena eLondon, ngokuchasene ne-superweightweight uJohn Ryder (29-5, 16 KOs), umzantsi ongaziwayo waseLondon, ubuncinci ngaphandle kwe-United Kingdom. , omele ukuba ulwa noDavid Morrell kwisihloko esiqhelekileyo seWBA. Imfazwe emibini edlulileyo, uRyder waphulukana nesigqibo esi-12 esijikeleze uCallum Smith, kwaye umlo kaRyder wakutshanje yayisisigqibo esivumelanayo esili-10 ngokuchasene nomntu ogama lingu (12-5-1) uMike Guy.
URyder akazange alwe njengobunzima obunzima kwaye ukuba uBivol wayengumcinga ozimeleyo, hayi upopu kaHearn, ngekhe acinge ngokulwa noRyder, ungaze uvumele uHearn ukuba aphumelele. Yintoni eya kuphumelela kwiRyder? Umceli mngeni wakhe wokugqibela, uCraig Richards, wayengafanelekanga ukuba aphumelele isihloko sehlabathi, kodwa uBivol wahamba naye umgama.
Akukho kukhankanywa kukaRamirez!
U-Hearn ude waya kwelinye inyathelo, esithi ufuna ukubeka i-Bivol ngokuchasene nembasa ye-Olimpiki ye-Olimpiki ka-2016 uJoshua Buatsi (15-0, 13 KOs) ngoMatshi ozayo.
Akukho kukhankanywa kweRamirez, okanye ikhosi!
URamirez oneminyaka engama-30 kungoku nje ukalwe uNombolo 2 nguMbutho weeManqindi weHlabathi (i-WBO) kunye no-5 yi-International Boxing Federation (IBF), kunye no-9 kwi-The Ring ezimeleyo.
I-superstars eziyinyani kumdlalo wamanqindi zifuna umlo kunye neembambano ukuze zikhusele indawo yazo kwimbali yomdlalo wamanqindi. Ngokunxulumene noku, iBivol neRamirez kufuneka balwe omnye nomnye, kuba omabini amajoni oyisile intshatsheli enye kuphela, uJean Pascal weBivol, uArthur Abraham "uZurdo."
Abalandeli bamanqindi bahlala bekhwaza ngokudlala umdlalo we-blockbuster. I-Bivol kunye neRamirez badibeneyo abangama-60-0 (39 KOs), iintshatsheli zehlabathi, kwaye balwa kwi-DAZN. Akukho sizathu sivakalayo seBivol vs.
"Ndingothuka ukuba iBivol ifuna omnye umchasi," uvale ngalo mazwi uRamirez. “Le yimilo abalandeli abayifunayo! Ekupheleni kosuku, ndiyazi ukuba ungumlwi olungileyo kwaye ndiyathemba ukuba uyayima koko akutshoyo. ”
Ayiloxesha lokuba uBivol azithethele kwaye afune ukuba uHearn enze umdlalo wembali ngokuchasene no "Zurdo?"
Ukujonga ngakumbi: Umlobi wamanqindi waseFrance uAlphonse Halimi
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi wembali	UAlphonse Halimi, Ixesha leBoxe	0
UAlphonse Halimi 1932-2006
(nguMarc @ Ixesha leBoxe)
Nge-12 kaNovemba ka-2006, uAlphonse Halimi, enye yeembethi manqindi ezinkulu zaseFrance, wasweleka emva kokugula ixesha elide. Lowo wabizwa ngokuba "sisoyikiso esincinci" wazalwa ngoFebruwari 18, 1932 kwindawo yamaJuda eConstantine, eAlgeria. Umlandeli wokulwa ezitalatweni, wazenzela igama elihle phakathi kwamaqela emigulukudu yolutsha eConstantinois. Kwangoko kwangoko, wachonga kunye nemodeli yakhe, intshatsheli yeenyawo ezimnyama uMarcel Cerdan. Umthungi ngoqeqesho kunye nelungu losapho lwabantwana abalishumi, u-Alphonse Halimi wazibonakalisa ngokukhawuleza kwimidlalo yakhe ye-eclecticism: wayengenguye nje umlo wamanqindi obalaseleyo kodwa wayekwayindadi. Ukuzimisela kwakhe kunye nezakhono zamanqindi azizange ziqwalaselwe. Ngokukhawuleza, wajoyina isixeko esikhulu apho waphumelela khona izihloko ezintathu zeentshatsheli zaseFrance kwi-bantamweight: ngo-1953, 1954 nango-1955.
Wakhawuleza wajika ubuchwephesha kwaye kwakuphantsi kokhokelo lwalowo ambiza ngokuba ngu "Monsieur Filippi", umqeqeshi wakhe, ukuba abe ligorha. Ngo-Epreli 1, 1957, eVel 'd'Hiv' eParis, woyisa u-Italiya u-d'Agata ngamanqaku, yiyo loo nto ebanga isihloko seentshatsheli zehlabathi kwi-bantamweight. Kwinkqubo, nge-6 kaNovemba ngo-1957 eWrigley Field eLos Angeles, yayingu-American Raul “el Ratón” Macias owabhatala ixabiso "loloyiko oluncinci". Phambi kwabangaphezu kwama-20,000 32 ababukeli abaziingcungcu, uAlphonse Halimi waphumelela itayitile emanyeneyo yebantamweight. IFransi izakulinda iminyaka engama-1950 ukubona imbethi-manqindi yesizwe ifezekisa umdlalo onje kwakhona. Ekupheleni kweminyaka yee-XNUMX, xa wayekwincopho yomsebenzi wakhe, uAlphonse Halimi wawa.
Woyiswa ngo-1959, KO. Kumjikelo we-8, nguJoseph Becerra waseMexico.
Ngexesha lama-1960, watshintsha uloyiso kunye noloyiso, ngelixa esongeza kwirekhodi lakhe nezihloko zaseYurophu kwi-bantamweight. UAlphonse Halimi uyayazi le nto, uninzi lomsebenzi wakhe usemva kwakhe. Ngaphandle kwendandatho, intshatsheli yeenkcubeko ezininzi zaseYurophu iyayazi nendlela yokungcangcazela ifayibha yelizwe. Emva kokuphumelela kwakhe u-Briton Freddie Gilroy eLondon ngo-1960, wathi: “Namhlanje ndiphindezele u-Joan wase Arc! "Uhlala engomnye weembethi manqindi zaseFrance ezaziwa kakhulu nezinetalente kwimbali" yobugcisa obuhle ".
Bhalisa kwi-new yethu Isiteshi se-YouTube ukuqala kungekudala ngeendaba zamanqindi kunye neziphumo zamva nje, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje kwikhonkco lomfanekiso wevidiyo apha ngezantsi: